အကောင်းဆုံး Friday Night အဖြစ်ဖန်တီးပေးမယ့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ Barများ
27 Apr 2018 . 12:33 PM
ဒီလို သောကြာနေ့မျိုးရောက်လာတဲ့အခါ ကိုယ်ဘော်ဒါတွေနဲ့ ပျော်ျေပျာ်ပါးပါး သောက်ကြစားကြမယ်။ စကားတွေပြောကြမယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ မဆုံဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်ကြောင်းကုန်စဉ်ကို ဖောက်သည်ချကြမယ့်အချိန်ကောင်းအခါကောင်းဖြစ်လာပြီလေ။ ဒီလိုအချိန်မှာ စကားကောင်းကောင်းပြောလို့ရမယ့်နေရာ၊ အေးအေးဆေးဆေးလည်းဖြစ်မယ့်နေရာတွေလိုအပ်လာပြီ။ ယမကာလေးကလည်း သောက်ရမှ စကားပြောဆိုတာ ပြောကောင်းတာဆိုတော့ ရန်ကုန်မြို့တွင်း ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ အေးအေးဆေးဆေးလည်း Chill လုပ်လို့ကောင်းတဲ့ Bar တွေကို ညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ်။
သူကတော့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တစ်ပျော်တစ်ပါး တွေ့ကြဆုံကြ စကားပြောလို့ကောင်းတဲ့ဆိုင်လေးပါ။ လူငယ်တွေအကြိုက်ဆုံး Bar လို့ဆိုရမလား အေးအေးဆေးဆေးလည်းထိုင်လို့ရတော့ လူငယ်တွေပိုပြီး လာကြတာများတယ်။ ဆိုင်ခင်းနေရာလေးက လသာမြို့နယ် မဟာဗန္ဓုလမ်းမှာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ ဖွင့်လှစ်ထားတာကလည်း မြေအောက်ထပ်ထဲမှာဆိုတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အနှောင့်အယှက်တွေကင်းတယ်လေ။ ကားသံတွေမကြားရတော့ အေးအေးဆေးဆေး Chill လို့ကောင်းတယ်။ Bar ထဲမှာ Live Band လေးပါရှိတော့ Acoustic သီချင်းလေးတွေလည်း နားထောင်ရင်း ငြိမ့်နေလို့ရပါတယ်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ ညနေ ၄နာရီကနေ ၁၁နာရီအထိဖွင့်ပါတယ်။
သူကတော့ Country Vibe ပုံစံမျိုးလေး ဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးတွေပိုပြီး နှစ်ခြိုက်ကြတယ်လို့ဆိုရပါမယ်။ Lighting နဲ့ Decoration တွေက Country Vibe ပုံစံမျိုးသွားထားတဲ့အတွက် Oldies Vibe ကို ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ အကြိုက်တွေ့စေမယ့် နေရာလေးပါ။ 50th Street Bar မှာ ဘီလိယက်ခုံလည်းရှိတော့ ယောကျာ်းလေးအတွက် ပိုပျော်ရာအရပ်ဖြစ်စေမယ်။ ဘီလိယက်လေးထိုးလိုက် ဘီယာလေးလည်းသောက်လိုက်နဲ့ဆို သာသာယာယာပဲ။ သူက အောက်ထပ်မှာ Bar ပုံစံလေးလုပ်ထားပြီးတော့ အပေါ်ထပ်မှာတော့ Restaurant ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ထားပါတယ်။ ဖွင့်လှစ်တဲ့အချိန်ကတော့ မနက် ၉နာရီကနေ ညနက် ၁နာရီအထိ ဖွင့်လှစ်ပါတယ်။ လိပ်စာကတော့ ဗိုလ်တထောင်၊ လမ်း ၅၀ အလယ်နားလောက်မှာ ရှိပါတယ်။
ဒီဆိုင်ကတော့ Freedom Society ကို သဘောကျတဲ့လူငယ်တွေ၊ လူရွယ်တွေရဲ့ Heaven လေးဖြစ်စေမှာပါ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုစိုက်နေစရာမလိုဘူး။ ကိုယ့်စိတ်ပျော်ရာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Hangout လုပ်လို့ကောင်းတဲ့ Spot လေးပါ။ Freedom Zone ပုံစံမျိုးခံစားရအောင် ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ဆိုင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက် Foreigner တွေအများဆုံးလာကြပါတယ်။ သောကြာနေ့တိုင်း Live Band အစီအစဉ်လေးလည်းရှိတဲ့အတွက် ဒီလိုနေ့မျိုးသွားပြီး ကိုယ့်ဘော်ဒါတွေနဲ့ Hangout လုပ်သင့်တယ်နော်။ ဆိုင်နေရာလေးကတော့ Urban Asia Center ထဲမှာ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်နော်။
Yangon Yangon Rooftop Bar
သူက Sakura Tower အပေါ်ဆုံးထပ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ Rooftop Bar ဖြစ်တဲ့အတွက် လှောင်အိုက်နေတဲ့နေရာမှာ ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ညလေးကို မကုန်ဆုံးချင်တဲ့သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး Spot လေးဖြစ်မှာပါ။ ကျယ်ဝန်းတဲ့ ဝရံတာ ဧရိယာထဲမှာ အမိုက်စား DJ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေကိုနားထောင်ပြီး Chill လုပ်ရထက်ကောင်းတာ ဘာရှိနိုင်ဦးမလဲ? ဆိုင်ကိုလာရောက်ပြီး Chill ကျတဲ့သူတွေကလည်း ကိုယ့်အဖွဲ့နဲ့ ကိုယ်သိပ်သိပ်သည်းသည်း Chill ကြတာဆိုတော့ အာရုံနောက်စရာမရှိဘူးလေ။ Lighting နဲ့ Decoration တွေကလည်း အကောင်းဆုံး Friday Night ဖြစ်အောင် ပံ့ပိုးပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
After 8 Bar
After 8 ကိုတော့ ထွေထွေထူးထူးညွှန်းနေစရာမလိုလောက်ဘူးထင်ပါတယ်နော်။ ရန်ကုန်မြို့ တစ်ခုလုံးရဲ့ လူငယ်ထုကြီးရဲ့ Heart တောင်ဖြစ်လို့နေလောက်ပါပြီ။ Cocktail တွေ၊ Food Recipe တွေကတော့ တကယ့်ကို လျာလည်သွားစေလောက်ပါတယ်။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အလှဆုံး အမှတ်တရဓာတ်ပုံလေးတွေကို ရယူစေနိုင်မယ့်နေရာဆိုလည်း မှန်ပါလိမ့်မယ်။ After 8 ရဲ့ တည်နေရာလေးကတော့ Myanmar Plaza အပေါ်ဆုံးထပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ် Bar ကိုသွားပြီး Chill ရမလဲဆိုတာ အခုလောက်ဆိုရင် စဉ်းစားလို့ရကောင်းလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ Happy Friday ပါနော်။
အကောငျးဆုံး Friday Night အဖွဈဖနျတီးပေးမယျ့ ရနျကုနျမွို့ရှိ Barမြား
ဒီလို သောကွာနမြေို့းရောကျလာတဲ့အခါ ကိုယျဘျောဒါတှနေဲ့ ပြျောပြျောပါးပါး သောကျကွစားကွမယျ။ စကားတှပွေောကွမယျ။ သူငယျခငျြးတှေ မဆုံဖွဈတဲ့အခြိနျမှာ ဖွဈကွောငျးကုနျစဉျကို ဖောကျသညျခကြွမယျ့အခြိနျကောငျးအခါကောငျးဖွဈလာပွီလေ။ ဒီလိုအခြိနျမှာ စကားကောငျးကောငျးပွောလို့ရမယျ့နရော၊ အေးအေးဆေးဆေးလညျးဖွဈမယျ့နရောတှလေိုအပျလာပွီ။ ယမကာလေးကလညျး သောကျရမှ စကားပွောဆိုတာ ပွောကောငျးတာဆိုတော့ ရနျကုနျမွို့တှငျး ထိုငျလို့ကောငျးတဲ့ အေးအေးဆေးဆေးလညျး Chill လုပျလို့ကောငျးတဲ့ Bar တှကေို ညှနျးပေးလိုကျပါတယျ။
သူကတော့ ကိုယျ့သူငယျခငျြးတှနေဲ့ တဈပြျောတဈပါး တှကွေ့ဆုံကွ စကားပွောလို့ကောငျးတဲ့ဆိုငျလေးပါ။ လူငယျတှအေကွိုကျဆုံး Bar လို့ဆိုရမလား အေးအေးဆေးဆေးလညျးထိုငျလို့ရတော့ လူငယျတှပေိုပွီး လာကွတာမြားတယျ။ ဆိုငျခငျးနရောလေးက လသာမွို့နယျ မဟာဗန်ဓုလမျးမှာဖှငျ့လှဈထားပါတယျ။ ဖှငျ့လှဈထားတာကလညျး မွအေောကျထပျထဲမှာဆိုတော့ ပတျဝနျးကငျြရဲ့ အနှောငျ့အယှကျတှကေငျးတယျလေ။ ကားသံတှမေကွားရတော့ အေးအေးဆေးဆေး Chill လို့ကောငျးတယျ။ Bar ထဲမှာ Live Band လေးပါရှိတော့ Acoustic သီခငျြးလေးတှလေညျး နားထောငျရငျး ငွိမျ့နလေို့ရပါတယျ။ ဆိုငျဖှငျ့ခြိနျကတော့ ညနေ ၄နာရီကနေ ၁၁နာရီအထိဖှငျ့ပါတယျ။
သူကတော့ Country Vibe ပုံစံမြိုးလေး ဖှငျ့လှဈထားတာဖွဈပါတယျ။ လူကွီးတှပေိုပွီး နှဈခွိုကျကွတယျလို့ဆိုရပါမယျ။ Lighting နဲ့ Decoration တှကေ Country Vibe ပုံစံမြိုးသှားထားတဲ့အတှကျ Oldies Vibe ကို ကွိုကျတဲ့သူတှအေတှကျတော့ အကွိုကျတှစေ့မေယျ့ နရောလေးပါ။ 50th Street Bar မှာ ဘီလိယကျခုံလညျးရှိတော့ ယောကျြားလေးအတှကျ ပိုပြျောရာအရပျဖွဈစမေယျ။ ဘီလိယကျလေးထိုးလိုကျ ဘီယာလေးလညျးသောကျလိုကျနဲ့ဆို သာသာယာယာပဲ။ သူက အောကျထပျမှာ Bar ပုံစံလေးလုပျထားပွီးတော့ အပျေါထပျမှာတော့ Restaurant ပုံစံမြိုးလေးလုပျထားပါတယျ။ ဖှငျ့လှဈတဲ့အခြိနျကတော့ မနကျ ၉နာရီကနေ ညနကျ ၁နာရီအထိ ဖှငျ့လှဈပါတယျ။ လိပျစာကတော့ ဗိုလျတထောငျ၊ လမျး ၅၀ အလယျနားလောကျမှာ ရှိပါတယျ။
ဒီဆိုငျကတော့ Freedom Society ကို သဘောကတြဲ့လူငယျတှေ၊ လူရှယျတှရေဲ့ Heaven လေးဖွဈစမှောပါ။ ဘယျသူ့ကိုမှ ဂရုစိုကျနစေရာမလိုဘူး။ ကိုယျ့စိတျပြျောရာ လှတျလှတျလပျလပျ ကိုယျ့သူငယျခငျြးတှနေဲ့ Hangout လုပျလို့ကောငျးတဲ့ Spot လေးပါ။ Freedom Zone ပုံစံမြိုးခံစားရအောငျ ဖှငျ့လှဈထားတဲ့ ဆိုငျလေးဖွဈတဲ့အတှကျ Foreigner တှအေမြားဆုံးလာကွပါတယျ။ သောကွာနတေို့ငျး Live Band အစီအစဉျလေးလညျးရှိတဲ့အတှကျ ဒီလိုနမြေို့းသှားပွီး ကိုယျ့ဘျောဒါတှနေဲ့ Hangout လုပျသငျ့တယျနျော။ ဆိုငျနရောလေးကတော့ Urban Asia Center ထဲမှာ ဖှငျ့လှဈထားပါတယျနျော။
သူက Sakura Tower အပျေါဆုံးထပျမှာ ဖှငျ့လှဈထားပါတယျ။ Rooftop Bar ဖွဈတဲ့အတှကျ လှောငျအိုကျနတေဲ့နရောမှာ ကိုယျ့ရဲ့ တနျဖိုးရှိတဲ့ညလေးကို မကုနျဆုံးခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ အကောငျးဆုံး Spot လေးဖွဈမှာပါ။ ကယျြဝနျးတဲ့ ဝရံတာ ဧရိယာထဲမှာ အမိုကျစား DJ ဖြျောဖွတေငျဆကျမှုတှကေိုနားထောငျပွီး Chill လုပျရထကျကောငျးတာ ဘာရှိနိုငျဦးမလဲ? ဆိုငျကိုလာရောကျပွီး Chill ကတြဲ့သူတှကေလညျး ကိုယျ့အဖှဲ့နဲ့ ကိုယျသိပျသိပျသညျးသညျး Chill ကွတာဆိုတော့ အာရုံနောကျစရာမရှိဘူးလေ။ Lighting နဲ့ Decoration တှကေလညျး အကောငျးဆုံး Friday Night ဖွဈအောငျ ပံ့ပိုးပေးနမှောဖွဈပါတယျ။
After 8 ကိုတော့ ထှထှေထေူးထူးညှနျးနစေရာမလိုလောကျဘူးထငျပါတယျနျော။ ရနျကုနျမွို့ တဈခုလုံးရဲ့ လူငယျထုကွီးရဲ့ Heart တောငျဖွဈလို့နလေောကျပါပွီ။ Cocktail တှေ၊ Food Recipe တှကေတော့ တကယျ့ကို လြာလညျသှားစလေောကျပါတယျ။ ကိုယျ့သူငယျခငျြးတှနေဲ့ အလှဆုံး အမှတျတရဓာတျပုံလေးတှကေို ရယူစနေိုငျမယျ့နရောဆိုလညျး မှနျပါလိမျ့မယျ။ After 8 ရဲ့ တညျနရောလေးကတော့ Myanmar Plaza အပျေါဆုံးထပျမှာဖွဈပါတယျ။
ဘယျ Bar ကိုသှားပွီး Chill ရမလဲဆိုတာ အခုလောကျဆိုရငျ စဉျးစားလို့ရကောငျးလောကျပွီထငျပါတယျ။ အားလုံးပဲ Happy Friday ပါနျော။